सेनाका दुई टोली सेमिफाइनलमा भिड्ने | KhelkudNews.com
1. क्युकेस चेस सुरु 2. रत्नजित र दिपेश अन्तिम आठमा 3. पिताम्बर तिम्सिना उपाध्यक्षमा नियुक्त 4. नेपाल देखि अमेरिकासम्म छाएका कराते रेफ्रि 5. अघि बढ्दै विकास
सेनाका दुई टोली सेमिफाइनलमा भिड्ने
Published on December 17, 2014, by Manoj Shiama - Posted in others, Slideshow 0
नेपाली सेनाको रातो र निलो दुवै टोली पोखरामा जारी पश्चिम पृतना दोश्रो खुला राष्टिय ह्याण्डबल रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकाछन् । दुवै टोलीको सेमिफाइनलमा भिडन्त हुने भएको छ ।
अधिकाशं राष्ट्रिय खेलाडी सम्मिलित सेनाको रातो समूह चरणको दुवै खेलमा जित हात पार्दै समूह ख बाट विजेता वन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो । त्यस्तै एक खेल जित र एक हार व्यहोर्दै निलो समूह क बाट उपविजेता बन्दै सेमिमा पुगेको हो ।
बुधबार सम्पन्न खेलमा नेपाली सेनाको रातोले पहिलो खेलमा सशस्त्र प्रहरी वलको एपिएफ क्लब संग २४÷२४ गोलको वरावरी खेल्यो । सेना रातोको अमर श्रेष्ठ र सुवर्ण मदिहाङ्गले समान ६÷६ गोल गरे । एपिएफका दीपक वोहराले ७ र विरेन्द्र चन्दले ६ गोल गरे । अर्को खेलमा सेनाको रातोले मध्यमाञ्चलमाथी ५०—१३ को जित निकाल्यो । सेनाका अमरले ११ गोल र श्री बहादुर सिंजालीले १० गोल गरे । मध्यमाञ्चलका राजेश तामाङ्गले ५ गोल गरे । एपिएफ पनि एक जित र एक वराविरीका साथ ४ अंक भएता पनि गोल भिन्नताका कारण समूहमा दोश्रो हुंदै सेमिफाइनलमा प्रवेश ग¥यो ।
समूह क को खेलमा सेनाको निलोले मध्यमाञ्चललाई ३०÷१४ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिमा स्थान वनाएको हो । सेनाका राजु पन्तले ११ र अमृत थापाले ८ गोल गरे । मध्यमाञ्चलका उदय वोगटीले आफ्नो टिमको लागि ५ गोलको योगदान गरे । अर्को टोली पश्चिमाञ्चल समूह क बाट पहिलो हुंदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकोहो ।
अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरु सम्मानित